‘अब हामीलाई अब एकएक हिसाब चाहिन्छ, दश अर्ब कहाँ खर्च भयो ?’ – हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ जेष्ठ २७, मंगलवार ०८:४०
उनले काम गर्ने अदालत, प्रेस तथा नागरिक कसले रोके भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनको प्रश्न थियो, ‘नियन्त्रणमा रहँदारहँदै पनि कोरोनाको यो अवस्था? दोष कसको? पैसा नभएर, अदालतले वा कांग्रेसले छेक्यो? सबैकुरा म जान्दछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अहंकारले रोकेको । सरकारको अकर्मन्यताले रोकेको। असक्षमताले रोकेको हो।’ यो सरकारले कोरोना लडाइँबाट पार लगाउन नसक्ने उनले बताए ।
उनले अब आफूहरु सहयोग गर्छौं भनेर नबस्ने र त्यसको उत्तर खोज्ने उनले बताए । उनले भने, दश अर्ब कहाँ खर्च भयो, हामीलाई एकएक हिसाव चाहिन्छ। ’ उने क्वारेन्टाइन भद्रगोल भएको भन्दै यो क्वारेन्टाइन हो कि कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । थापाले प्रधानमन्त्रीको गीत र कविताबाट जनताले राहत नपाउने बताए ।
Spread the loveचितवन । कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत एक जनाको मृत्यु भएको छ । भरतपुर अस्पतालको आइसीयुमा उपचार गराइरहेका ६८ वर्षीय पुरुषको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको हो । उनलाई सोमबार मात्रै कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका उनलाई कोरोना सक्रमण भएपछि भरतपुर अस्पताल […]